Burcad badeed? - Qore: C/wahaab Baajeey,
Burcad badeed? - Qore: C/wahaab Baajeey, Holland
Dhawaanahaan waxaa isa soo taraya tirida marakiibta lagu afduubto xeebaha Somaliya. Arintaan ayaa waxay sababtay caalamka oo rabay in uu indhaha ka qabsado dambiyada culus ee laga geysanayo dhulka Somaliya uu haatan xariir iyo shirar ka yeesho arimaha Somaliya, inkastoo xiriirkaa uu ku saabsan yahay oo kaliya “sida looga hortagi lahaa dhibaatada ay u keeni karaan dhaqaalaha wadamada Europe, Asia iyo Mareykanka burcad badeeda Somalida”.
Waxaan qoraalkeyga oo ku saleysan maqaalada Reuters, AFP, Interfax, AP iyo ANP iyo arigtideyda shaqsi ahaan uga jawaabi doonaa su’aalaha hoos ku xussan:
Waa maxay sababta uu caalamka indha iyo dhagaha uga qabsaday arimaha Somaliya?
Waa ayo ‘burcad badeeda Somalida’?
Yaa ka dambeeyo ama maamulo waxaan lagu tilmaamay ‘burcad badeeda Somalida’?
Waa maxay danaha laga leeyahay hawlaha burcadnimo ee laga fulinayo xeebaha Somaliya?
Rajo malaga leeyahay in dalka Somaliya uu nabad iyo dowlad yeesho?
Dalka Somaliya waxaa in muddo ah laga geysanayey falal ka dhan ah xaquuda aadanah. Ma rabo in aan kugu dawakhiyo tirada hogaamiye koxeed, wasiir, madaxweyne iyo dawladaha ajaanibka ah ee Somaliya ka geystay falalkaan ka dhanka ah xuquuxda aadanaha.
Basle waxaa isweydiin u baahneyn in Somaliya laga geystay falal uusan xamili karin uurka qofka caafimaad qaba. Arintaan iyada ah ayaa sababtay in caalamka uu indha ka qabsado arimaha Somaliya, maadaama aan maxkamad lagu soo taagi karin fal aysan joogin markii uu dhacayey isla markaan aysanba ogeyn in uu dhacay. Waxayna wadamada aduunka arimaha Somaliya u dhaafeen wadamo danaha ay Somaliya ka leeyihiin ay ka weyntahay cabsida ay ka qabaan in mustaqbalka maxkamad lasoo taagoo. Wadamadaan Somaliya falalkaan ka wada oo ay ugu horeyso Itoobiya, waxay ku dhiradeen ku dhaqaaqida falalkaan loo geysano caruurta iyo dumarka Somaliyeed markii ay Mareykanka ka heleen damaanad ah in aan maxkamad lasoo taagi doonin.
Wadamada EU waxay arimaha Somaliya ka ahaayeen mararka qaar dhax-dhaxaad markaad fiiriso kaalinta weyn ee uu Mareykanka ku leeyahay burbarka iyo dhibaatada wali ka socoto dalka Somaliya. Balse waxaan si saa'id ah u daboolneyn dhaqaalaha ay wadamada EU ku bixiyeen soo galitaanka iyo joogitaanka ciidamada Itoobiya / Uganda ee dalka Somaliya.
Waxaase dhacday in wadamada EU markii ay arkeen dhibaatada ka dhalatey maalmihii ugu horeeyey ee ay ciidamada Itoobiya soo galeen dalka Somaliya iyo tirada dadka gacanta ciidamda Itoobiya ku dhintay, in ay bilaabaan dib u gurasho. Siyaasiin reer Europe ah oo uu ka mid yahay Louis Michel, Eric van der Linden iyo Jens Orlander ayaa markiiba waxay bilaabeen in gudaha EU looga shiro dambiyad EU uga imaan kara falalka laga geysanayo Somaliya oo ay EU dhaqaale ku bixiso. Waxaana EU u suurto gashay in ay sameeyaan guddi ka kooban xeer yaqaano oo baritaan ku sameeyey eeda EU uga imaan karta falalka ay ciidamda Afrikaanka ah ee maal geliyeen ka geysanayaan dalka Somaliya. Waxay guddigaan ku guuleysteen in ay helaan qorsho ay EU uga baxsan karto hadii mustaqbalka maxkamad lasoo taago. Gushaan ay gareen guddiga waxay suurta galisay in markiiba lacagtii loo balan qaaday ciidamda Afrikaanka lagu wareejiyo gacanta dowladaha Afrikaanka ah.
Wixii maalintaa ka dameeyey EU waxay ku dadaashay in magacayada EU iyo Somaliya aan 1 buug lagu wada xussan 1 qalinna lagu wada qorin. Siyaasiinta reer Europe ugu tunka weyn waxay sidoo kale bilaabeen in wixii su'aalo ah oo ku saabsan Somaliya ay ka caga jiidaan. Sidoo kale siyaasiin badan oo Afrikaan, Asiaan iyo Mareykan ah waxay bilabeen in markasta oo ay maqlaan Somaliya ay dhagaha, afka iyo indha is qabtaan.
Majiraa caadil/maxkamad kuu ciqaabi karto fal aadan geysan amaba aadan ogeyn in uu dhacay?
Burcad badeeda Somalida
Somalida waa dad aadanaha intooda badan kaga roon bad-baadinta naftooda, iska dhicinta hogaamiye-koxeedyada, risiq doonka (ganacsi), u dagaalanka cadaalada iyo waxyaabo badan oo aan halkaan kusoo koobi karin.
Bal waxaad eegtaa hooyada Somaliyeed ee kadib markii ninkeedi la’dilay ganacsi ay gashay caruurteeda horumar ku gaarsiisyay.
Imisa caruur Somaliyeed oo waalidkood la dilay, ayaa si karti leh uga baxsaday dalka Somaliya maantana dhaqaalo ay ka sameeyeen dalka dibadiisa ku bixinnaya xalka Somaliya?
Dib ugu noqo wakhtiga ee soo xisaabi tirada shaqsiyaad awood leh ee ay gacan isaga qabteen shacabka Somaliya.
Sidoo kale soo xisaabi tirada buugta uu caalamka ka qoray sida kartida leh ee ay isaga qabteen gumeysigii adeegsanay hub xiligaa casriga ahaa oo ay ka mid yihiin dayuuradaha wax lagu laayo.
Si maantana la isaga dhiciyo burcad badeeda waxaa loo baahayn in marka hore dhawr arimood la ogaado.
Burcad badeedaan tirada badan Somaliya hore looguma arag, ee xagey ka yimideen?
Wuxu ma’ahan qabiil meel daga, oo meel ama oday loogu hagaago leh. Mana ahan jabhad ama maamul goboleed. Waa run in dad badan ay ku eedeeyeen maamul goboleedka Puntland uu ka dambeeyo hawlaha afduubka, balse aniga ma doonayo in aan qoraalkeyga ku weeraro maamul/qabiil.
Balse marka aan akhriyey qoraalada Admiral Philip Jones iyo Andrew Mwangura, oo ay 1-da bisah oktober 08 xabsiga u taxaabtay dowlada Kenya maadaam uu qoraal ka qoray markabka MV FAINA ee hubka u siday Kenya laguna heysto xeebte Eyl ee dalk Somaliya iyo qoraalo ay arimaha Somaliya kasoo saareen xafiisyo madaxbanaan oo isku hawla amaanka biyaha Somaliya. Waxaan arkay tirada afduubka oo sii kordheyso iyo dhaqaalah laga helo afduubkaan (sanadkaan kaliya waxaa la afduubay ka badan 30 markab, waxaana laga helay ka badan 30 milyan dollar)
Burcaddaan maahan dhalinyaro calooshood u shaqeystaal ah. Waxay leeyihiin maamul ka caawiyo:
- Qorsheynta falalka burcadnimo
- Helista hub casri ah
- Isticmaalka ama qaabka loo adeesado doomaha dheereeyo
- Helista iyo barashada isticmaalka qalabka isgaarsiinta casriga ah
- Guriyenta iyo waxyaabo badan oo u suurta galiyey in ay u sahlanaato afduubista ` maraakiibtaan.
Dhalinyaradaan ma’ahan kuwo matalo qabiil, inkasta oo intooda badan ay kasoo jeedaan hal qabiil, lamana oran karo waa kuwo u shaqeeyo dano qabiil.
Yaa ka dambeeyo ama maamulo?
Falalkaan waxaa ka dambeeyo siyaasiin Somaliyeed oo bilawgii dhaqaalo badan ku bixiyey, balse haatan hawlaha burcadnimo ka helo dhaqaalo / faa’iddo badan.
Siyaasiintaan waxay qaarkood ka mid ahaayeen dowladihii soo maray Somliya halka qaarkood ay wali xubun ka yihiin ama miisaan ku leeyihiin siyaasada DFKMG ah.
Danaha laga leeyahay
Caalamka wuxuu haatan ku hawlan yahay sidii uu kaga fogaan lahaa eed ku saabsan xuquuqda aadanaha oo mustaqbalka kaga timaado Somaliya. Sida awgeed waxay wadamada EU xaddadeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen Somaliya. Arintaanna waxay sababtay in dhaqaalaha iyo awooda DFKMG ah uu hoos u dhac ku yimaado.
DFKMG / siyaasiinta qaarkood waxaa lasoo daristay cabsi saa’id ah. Waxaa yaraadey dhaqaalihii soo gali jirey DFKMG, ciidamada AMISOM oo dhaqale badan loo hayn iyo wararka sheegaya in Itoobiya ay kala baxeyso ciidankeeda Somaliya oo batay ayaa cabsi darran ku abuuray siyaasiin Somaliyeed.
Sida kaliya ee siyaasiintaan ay cabsidaan uga bixi karaan ayaa ah iyadoo caawinaad dalka dibadiisa ah ay helaan maadaama aysan wax kalsooni ah ka heysan shacabka Somaaliyeed.
Maadaama uu caalamka baroorka siyaasiintaan iyo DFKMG dhagaha ka fureystay waxay danta ku qasatay in la helo qaab kale oo caalamka markale loogu soo jeediyo arimaha Somaliya.
Shidaalka ay wadamada aduunka helaan 30% waxaa laso marsiiyaa wabiga Suez (Qanâ el Suweis). Waxuu wabigaan isku xiraa qaaradaha Afrika iyo Asiya waxaana isticmaalo sanad walba 15 kun oo markab.
Wadamad EU iyo Rush-ka amaanka wabigaan muhiim saa’id ah ayuu u leeyahay maxaa yeelay qeb weyn oo dhaqaalohooda ka mid ah ayaa ku xiran halkaan.
Sidaa awgeed waxay dantu ku kaliftay in ay wax ka badalaan siyaasadoodi ahayd wax ma maqlo waxna ma arko.
Xiriirkaan sida cajiibka lagu soo noleysiiyey wuxuu farxad galiyey tiro siyaasiin ah iyo DFKMG ah.
Wadamada haatan marakiibta dagaal usoo diray Somaliya ama qorshohoodu yahay waxaa ka mid ah: Belgium, Cyprus, France, Germany, Lithuania, the Netherlands, Spain, Sweden, Britain iyo Rusia. Waxaana lagu heshiiyey xafiiska weyn ee laga maamulayo qorsha laga hor tagaayo ‘barcad badeeda Somalida’ in laga dhigo magaalada London.
Waxaase su’aal ka taagneyn in mar walbo marakiib dagaal iyo dhaqaale caalamka laga helo aan lagu maamuli karin dalka iyo dadka Somaliyeed isla markaana ay muqaddas tahay in la helo kalsoonida Somalida.
Somaliya waxay ka tilaabtay marxalado kala duwan, shakina kuma jiro in xaalada ay hadda ku jirto ka bixi doonto.
Waxaa soo kordhayo tirada dibad baxyada xorta ah ee ka dhaco Somali, tirada siyaasiinta dibada joogo ee midoobayo, tirada qabaa’ilada wada shaqeynayo si ay danta guud ee ka dhaxeyso u gaaraan iyo arimo badan oo ku dayasho muddan oo ay dhawaanahaan ku dhaqaaqeen muwaadiniin Somliyeed. Marka aad aragto tirada sii kordheyso dalka iyo dibidaba ee muwaadiniinta Somaliyeed ee wadaninimada ay ka muuqato isla markaan ka fogaanayo wax walba oo salka ku hayo qabiil iyo neceyb, waxaa kuu muuqanayo in xalku uu soo dhaw yahay.
Guul iyo nabad aan loo dhibtoonna ma raagaan.
Maqaalkeyga xigana waxaan ku falanqeyn doonaa micnaha guusaha iyo wadada loo maro guusha una mareen kuwii inaga horeeyey.
Marnaba haka nijad jabin xalka Somaliya!
C/wahaab Baajeey, Holland
Fadlan wixii feedback ah iigu soo hagaaji daacad2000@hotmail.com